«Nitranga ny nafenina » -
AccueilTresaka«Nitranga ny nafenina »
06/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Voavaly ny fanontaniana napetraky ny namana mpanao gazety teto amin’ny TRIATRA nanao hoe : « Iza loatra re izao mpanao politika mitady vola mafy amin’ny vanim-potoana akaiky fifidianana izao e ? » Nirongatra izay tsy izy mantsy ny fanaovana « Kidnapping » tao anatin’izao fotoan’ny fifidianana izao. Izany hoe efa hatramin’ny fiandohan’ity taona ity, raha vao fantatra fa tsy azo nihodivirana ny niatrehana ny fifidianana filoham-pirenena, dia maro ihany koa ireo teratany karàna nitondra faisana tamin’ny alalan’ny Kidnapping.
Ny 99 andro ihany anefa ny an’ny mpanao ratsy, fa ny iray kosa an’ny tompony. Voasambotra tany Antsirabe ny talata lasa teo araka izany ilay tena atidoha mpikotrika ity resaka “Kidnapping” ity. Tsy iza akory fa olona akaiky an’i Andry Rajoelina sy ny forongony ilay mpanomana sy mpaniraka olona amin’ity raharaha nampiteny ny moana ity. Anisan’ireo mpanohana mahafatra-po ity kandidà ity ihany koa.
Asa na fifandrifian-javatra na ahoana, fa tena nampiaiky ny rehetra, na ny teto an-toerana hatramin’ny tany ivelany ny vola nafafin’i Andry Rajoelina tamin’ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fampielezan-kevitra nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany. Niaiky mihitsy mantsy ireo mpanao politika sy mpanao gazety vahiny, satria na ny vola nanomanan’izay nilatsaka filoham-pirenena Amerikana aza mbola ambany lavitra noho ny an’i Andry Rajoelina, izay nahatratra 183 Tapitrisa Dolara Mazava izany izao hoe iza no manao inona eto amin’ity firenena ity? ary avy aiza ihany koa ireo volabe natao fafikatrana nanerana an’i Madagasikara nanaovana fampisehoana sy fampanantenana poakaty. Ny tena marina dia variana nanenjika olona fotsiny noho ny hevitra ara-politika tsy nitoviana. Izao anefa ny vokany, tsy nila nenjehina fa nipoitra ho azy ny nafenina rehetra. Soa fa mbola tao anatin’ny fampielezan-kevitra dia efa nitranga izao raharaha maloto izao, nahafahan’ny vahoaka mpifidy nahafantatra hoe volana inona no hambolena Coton de Tuléar, sy hamindrana an’i MIAMI any Toamasina.